१५ स्थान माथिको माल्दिभ्ससँग भिड्दै नेपाल, जितको सम्भावना कति ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
१५ स्थान माथिको माल्दिभ्ससँग भिड्दै नेपाल, जितको सम्भावना कति ?
२० मंसिर, काठमाडौं । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पुरुष
फुटबलमा आज नेपाल र माल्दिभ्सबीच खेल हुँदैछ । खेल दिउँसो १ः३० बजे काठमाडाैंकाे त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा हुनेछ ।
१३ औँ दक्षिण एसियाली खेलमा भुटाविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै माल्दिभ्सका खेलाडीहरु
फिफा बरियतामा १५ स्थानमा माथि रहेको भएता पनि माल्दिभ्सले १३औँ सागमा राम्रो प्रर्दशन गर्न सकिरहेको छैन । उसले फिफा बरियतामा आफूभन्दा २४ स्थान तल रहेको भुटानसँग १–० गोलअन्तरले पराजित हुनुले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ । यस्तै आफूभन्दा २२ स्थान तल रहेको बंगलादेशसँग १–१ र ५० स्थान तल रहेको श्रीलंकासँग गोलरहित बराबरी खेल्नुले पनि सागमा माल्दिभ्सको प्रदर्शन मुल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।
Previousहैदरावाद प्रकरणः सामुहिक बलात्कारपछि हत्या गर्ने ४ जनालाई घटनास्थलमै लगेर इन्काउन्टर
Nextबिहीबार सुनको मूल्य मंसिर महिनाकै उच्च, आज घट्यो